Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa? | Aarsaa Kakuu Haaraa New Covenant Ministries
← Ilmicha Qabdaa?
Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate →
Yesus oolmaa namoota baayee irra akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa isaa kana maaliin deebifnuuf? Yesus akkas jedhe warri ani irra oolmaa qabu, warri na jaallatan sagalee koo hojii irra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Kanaaf waaqayyoo kee humna keen, beekumsa keen, lubbuu keen, qabeenya keen, dhaloota keen jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta’e, qabeenya, beekumsa isanii, humna isanii kenuuf dubbatti hin jedhan. Kanaaf Pawuloos jaalala Yesusittii maaltuu gargar na baasuu danda’a jedhe.
Oolmaa Yesus waliin haa yaadanu:
Du’e du’a barabaraa jalaa nu baraare (Yoh.3:16).
Waaqa ta’e otuu jiru jaalala irra kan ka’e salphatee salphina nu oolche (Mat.27:31).
Dhiiga isaa qulqulluu naaf, siif dhangalaasee xurii cubbuu nu irraa dhiqee nu qulqulleesse (1Pex.1:18; Ibr.9:12; Ibr.10:10).
Abboo Seexanaa cabsee gabrummaa Seexanaa jalaa nu baase (Ibr.2:14).
Eenyu iyyuu kabalamuu hin jaallatu, garuu Yesus nuuf jedhe kabalamee (Yoh.18:22; Yoh.19:3).
Namni yoo baayee nama tuffate hancufa afaanii baasee itti tufa, Yesus nuuf jedhe tuffatame hancufa namoota danda’e (Mat.27:30).
Amala namoota keessa eenyu iyyuu akka itti qoofamu, araabfamu hin barbaadu. Garuu Yesus nuuf jedhe qoosa fi araabsoo namoota baate (Mat.27:35-44).
Nuuf jedhe garafame. Utuu jireenyatti jiruu qamni isaa dhigaa cocoobse, nuuf jedhe waraaname (Yoh.19:34). Kanaaf dirmamuu kootiin fayyitanii jirtu nuun jedhe (Yoh.19:1).
Akka seera Isra’elootatti namni fannifamuu nama abaramaadha. Yesus nuuf jedhe akka abaramaatti fanifame (Yoh.19:17-18).
Gara Si’oolitti gad bu’e furtuu seexanni Adamiin fi Hewwan sobdee harka fudhatee harkaa fuudhe warra isatti amananitti keenne. Kanaaf seexanni ijoollee gooftaa irratti abboo hin qabu.
Nuuf jedhe foon uffatee biyya lafaatti karaa hundumaa rakkate.
Du’a mo’e ka’e arfii du’a cabsee, warra isaatti amanuuf abdii du’aa ka’u dhaabe (Luq.24:3-10; 1Qor.15:54-55; Isa.25:8).
Akkasumatti biyya lafaatti nu hin dhiifne, Hafuura Qulqulluu isa humna nuuf ta’a, nu geggeessu akkuma nu abdachisee nuuf ergee. Kanaan biyya lafaa kana keessatti wara boqonaa fi aara galfiin, yaaddoo tokko malee jirataan nu taasisee (Hoji.E.1:8; Hoji.E.2:1-4, 17-21).
Akka itti biyya lafaa keessatti jirachuun nu irra jiraatu fakkeenya nuuf ta’e gara mirga Abba isaa ta’ee jira.
Warra ba’an isanitti ulfaate gara koo kotta jedhe, warra gara isaa dhufan boqachisee jira (Mat.11:28-30; Er.31:25; Mul.21:4).
Abboo mucummaa akkasumas immo abboo biyya lafaa fi seexana irratti nuuf kenne (Yoh.1:12; 1Yoh.3:1-3).
Knaaf yaa Obboleessa koo atis yaa Obboleetti koo oolmaa Yesus siif godhe kana maaliin deebisuuf karoorfatee jirta? Isin ifa biyya lafaati, sooggida biyya lafaati jedhe jira abbaan oolmaa keenya Yesus. Jireenya dukana’e ibsuuf, ifa ta’uuf murtoo hin gootu ree? Jireenya haadha’e mi’eesuf, sooggida hin tatuu ree? Koota ifaaf sooggida taanee oolmaa Yesus nuuf godhe kana deebifnaa. Humni isaa dadhabaa keessan ni hojjeta. Dadhabii keenya keessatti kan nu gargaru ayyaanii isaan nuuf haa baayyatu!